Apple inotanga kuodha zvikamu zveApple Watch 2 | IPhone nhau
Apple inotanga kuodha zvinhu zveApple Watch 2
Chizvarwa chekutanga che Apple Watch Yakapihwa munaGunyana 2014 pamwe neiyo iPhone 6 uye iPhone 6s Plus, asi haina kuenda kutengeswa kusvika Kubvumbi 2015. Tatova rinopfuura gore nehafu mushure mekuratidzwa paruzhinji, isu tese tinotarisira kuti kuchave nemuenzaniso mutsva. muna 2016, asi hapana anoziva kuti ichazviratidza riini. Runyerekupe rwuri kutenderera kuti Apple Watch 2 ichaunzwa kuWWDC ichaitika muna Chikumi, asi hapana chakasimbiswa.
Chero zvazvingaitika, zvinoita sekunge Apple iri pachena kuti iyo nguva yave pedyo uye, sekureva kwa DigiTimes, Ndingadai ndakatotanga odha zvinhu zvekutanga for the chizvarwa chechipiri yewadhi yako yakanaka. Kuti ive yakanyanya kutaurwa, Advanced Semiconductor Injiniya (ASE), iyo yatove inopa iyo Cupertino kambani neiyo SIP (System-in-Package) module yazvino Apple Watch, ingadai yatogamuchira mazhinji emirairo yezvatinogona kufungidzira kuti ichava S1.
Apple yatove kuraira iyo S2 module yeinotevera Apple Watch
Iyo S1 yaive yekutanga SIP module, iyo package yacho inosanganisira zvimwe zvinhu kupfuura SoC, kubva kuApple. Kufanana nezvakawanda zvezvinhu zvemafoni kana zvinogadzirwa zveapuro, iyo S1 yakagadzirwa navo, asi inogadzirwa nemakambani echitatu, vari mune ino kesi yavo chete ASE mutengesi. Yechipiri vhezheni, iyo ingangodaidzwa kunzi S2, Tim Cook uye kambani ichatanga kusiyanisa uye varairawo kubva kuAmkor uye STATS ChipPAC, pamwe kurasikirwa nekutsamira pakambani chete inovagadzira nhasi.
Mukati meS2 pachave nezvakawanda samsung zvinoriumba, senge processor, DRAM, NAND kupenya uye nevamwe. Apple "muvengi wemukati" akapawo iyo Cupertino kambani izvo zvakafanana zvikamu zvechizvino chizvarwa cheiyo smartwatch. Izvo zvinoramba zvichizivikanwa ndezvekuti: Ndeipi chaizvo iyo Apple Watch 2 ichasvika?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inotanga kuodha zvinhu zveApple Watch 2
Ndokumbirawo mudzokere pawebhu fomati kubva pakutanga, iyo nyowani inosemesa zvachose! Yese mraba inoratidzika kunge sewebhu kubva kuma90s
Masosi padyo neApple anoti zvese zviputi kubva muna1970 zvakagadziriswa